Mutambo mutsva unoputika pakati paWendy Williams-Kevin Hunter kurambana - Nhau
Kuru Varaidzo Macelebs Blog Style
Wendy Williams amutsa mutambo mutsva nemurume akaparadzana naKevin Hunter zvichitevera zvaakataura zvichangobva mukuparara kwemuchato wavo.
Pakutanga svondo rino, ane makore makumi mashanu nemashanu ekutaura hurukuro anoratidza muenzi akadzivirira chisarudzo chake kushandisa nguva aine makore makumi maviri nemanomwe ekubatwa nemhosva felon-akatendeuka-fashoni dhizaina Marc Tomblin mwedzi miviri mushure meiye akaiswa kurambana Kevin, 46. Wendy akaudza TMZ kuti mukumuka kwaKevin's zvinosemesa kubiridzira , anonzwa kuti anokodzera kuve neka 'tambo-yakasungirirwa-kunakidzwa.'
'Tarisa, murume wangu aive nemwana akazara nemukadzi waaive akabata naye kwemakore gumi nemashanu… uko kwandakavharirwa kungova poni yekuratidzira. Zvino, ndiri kurarama hupenyu hwangu, 'Wendy akaudza TMZ.
Zvinyorwa zviri padhuze naKevin - uyo kudzamara kupatsanurwa akashanda semaneja waWendy uye mugadziri mukuru pane yake TV show - ikozvino vadzokera kumashure, vachiudza TMZ kuti Kevin haana kumbochengeta Wendy 'pent kumusoro kumba' panguva yavo yemakore makumi maviri nemaviri muchato nekuti, sekunyora kwa TMZ, 'aive nehusimbe hwekupa dhamu' uye aisamboda kuenda kumitambo tsvuku kapeti kana kushandisa nguva pazvinhu zviri kunze kwake yakakurumbira hurukuro show.
Lev Radin / Pacific Press / LightRocket kuburikidza neGetty Mifananidzo
Sekureva kwaTMZ, 'Maonero anoonekwa naKevin… Wendy akaronga hurongwa hwake uye akasarudza, kunyanya, kuita hurukuro yake uye kuenda kumba.' (Ivo vekare vane mwanakomana, ane makore 18 okuberekwa Kevin Jr.)
Anobva padhuze naWendy, zvisinei, anoudza TMZ kuti zvirevo kubva kudivi raKevin hazvifanire kutendwa uye kuti Kevin aive 'anodzora zvakanyanya uye anonyengera' pavakaroora. 'Hapana chaanotaura ichokwadi,' sosi iri padyo naWendy yakawedzera.
Sources padhuze naKevin akaudzawo TMZ kuti akashatirwa kuti Wendy akati mukadzi Kevin aive nemwana aive tenzikadzi wake wemakore gumi nemashanu (massage Therapist Sharina Hudson, 34, akabereka mwana anofungidzirwa kuti ndewaKevin kutanga kwa2019) nekuti haana kusangana naye kusvika 2008.
ZitaFace LLC / Shutterstock
Kevin, sezviri pachena, anonzwa musiyano wemakore mana muhurefu hwekufungidzirwa kwake kusavimbika 'kuwedzeredza kwakanyanya,' anonyora TMZ. Kevin haana, zvakadaro, akaramba kuti panguva yemuchato wake naWendy, aive nehukama hwakareba hwakaguma mukuzvarwa kwemwana nemumwe mukadzi.
Chinhu chimwe chete Kevin naWendy vanogona kubvumirana pane? Kuti iye angangoda kuve nekumwe kunakidzwa muhupenyu hwake hwerudo zvichitevera kupatsana kwavo. Sekureva kweTMZ, Kevin haana godo rekuti Wendy ari kushandisa nguva kuenda kunodya uye kutandara nemurume mutsva mudiki - izvo, anowana.
Jennifer Garner anosanganazve nekubika chidhori Ina Garten: Mufananidzo
Colton Underwood thanks musikana, mhuri mushure mehondo yekoronavirus
mhomho vakadzi vakakanda nhengo vakatongerwa
tia mowry mucheche musikana zita
mafirimu evana kubva kuma90s
mifananidzo yehama hemsworth
rob kardashian uye nhema chyna
chii chakaitika kuna keri russell
jim parsons uye todd spiewak chikumbiro